हाम्रो उद्देश्य प्रत्येक नेपालीका घर-घरमा सिजीको एउटा सामान होस भन्ने हो
हाम्रो उद्देश्य प्रत्येक नेपालीका घर-घरमा सिजीको एउटा सामान होस भन्ने हो विष्णुप्रसाद ज्ञवाली- सहायक महाप्रबन्धक, सिजी ब्राण्ड
जनतापाटी मंगलबार, चैत २४, २०७७ मा प्रकाशित
नेपाली बजारमा चिरपरिचित नाम हो – सिजी ब्राण्ड । विगत १७ वर्षदेखि चौधरी ग्रुपमा कार्यरत विष्णुप्रसाद ज्ञवाली यही ब्राण्डलाई आम नेपालीको घरघरमा पु-याउन लागि परेका छन् । सिजी होम एप्लायन्सले हालै मात्र नयाँ वर्षको अवसर पारेर नयाँ वर्ष योजना पनि सार्बजनिक गरेको छ । यो ब्राण्डले कसरी नेपाली बजारमा आफ्नो पकड स्थापित ग-यो र यसका विशेषताका बारेमा उनै ज्ञावालीसँग जनतापाटीले गरेको कुराकानीः
सिजी इलेक्ट्रोनिक्स अन्तर्गतको सिजी ब्राण्डको बारेमा केही बताइदिनुस न ?
- सिजी इलेक्ट्रोनिक्स चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको एउटा इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी हो । यसले विभिन्न इलोक्ट्रोनिक्स सामाग्रीहरु एसम्बल गर्ने, आयात गर्ने र बिक्री बितरण गर्ने काम गर्दछ । हाम्रो इन हाउसमा विभिन्न ब्राण्डहरु छन, त्यो मध्ये एउटा ब्राण्ड सिजी ब्राण्ड हो । जुन आफ्नै पहिचान सहित देश विदेशमा स्थापित भएको छ । यो ब्राण्डको नाम हाम्रो संस्थापकज्यूहरुले आफ्नो थरबाट राख्नु भएको हो ।
सिजी ब्राण्डको सबै प्रोडक्ट यही नै एसम्बल हुन्छ ?
- कुनै प्रोडक्ट यही नेपालमै एसम्बल हुन्छ, कुनै प्रोडक्ट बाहिर बिदेशमा एसम्बल गराएर ल्याउँछौ । तर बाहिरै एसम्बल गरेपनि हाम्रै स्फेसीकेसन, फिचर, क्वालिटी हामीले जे दिन्छौँ त्यसै अनुसार बनाउँछ । भारत, चिन, इन्डोनेसिया, भियतनाम लगाएत विभिन्न देशमा हाम्रो एसम्बल हुन्छ ।
सिजी इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड नेपाली जनता माझ लोकप्रिय भइरहेको छ किन होला ?
-सिजी ब्राण्ड एक त नेपाली ब्राण्ड हो । नेपाली ब्राण्ड भएको र यसको उत्पादन समेत यही नेपालमा हुने भएकोले बहुराष्ट्रिय ब्राण्डका सामान भन्दा मूल्यमा अलि सस्तो छ । क्वालिटीमा सिजीले बहुराष्ट्रिय ब्राण्डको प्रतिस्पर्धामा गइरहेको छ । हामी क्वालिटीमा कहिलै कम्प्रोमाईज गर्दैनौ । यसका फिचरहरु नयाँ नयाँ छन् । बहुराष्ट्रिय ब्राण्डले जुन फिचरहरु दिइराखेको छ त्यो फिचरहरु हाम्रो ब्रान्डमा पनि सस्तो मूल्यमा उपभोक्त्ताले पाउनुहुन्छ । त्यसैले नेपाली जनतामाझ सिजी ब्राण्ड अलि बढी लोकप्रिय भएको हो ।
सिजी ब्राण्ड भन्दा सस्तो ब्रान्डका सामान चिनबाट आइराको छ, तपाईहरुको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?
- प्रतिस्पर्धा त नहुने कुरा नै भएन । सबै मार्केटमा प्रतिस्पर्धा छ भने यसमा नहुने कुरा भएन । हामीलाई क्वालिटीमा प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो छैन । हामीले तपाईलाई जुन क्वालिटी दिइराखेका छाैँ, त्यो क्वालिटी चाइनिज सामानमा पाउनु सक्नुहुन्न । चाइनिज सामान बिना ब्राण्डको, बिना इम्पोर्टरको पनि आइरहेको छ । त्यो सामानको क्वालिटी र हाम्रो ब्राण्डको क्वालिटीमा धेरै फरक छ । हाम्रो क्वालिटीमा प्रिमियम क्वालिटी पाउनु हुन्छ । त्यसमा अझ उपभोक्ताले आफ्टर सेल्स सर्भिस हाम्रो धेरै राम्रो पाउनु हुन्छ ।
कुनै पनि सामान किन्दा त्यसको बिक्री पछिको सेवा कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ । हामीले इलेक्ट्रोनिक्स आइटमको सामान बेचेर मात्रै हाम्रो काम सकिदैन । हामीले माल सामान बेच्छौ, ग्राहकको घरमा जान्छ, उहाँले हेर्नु हुन्छ, कुनै पनि बेलामा समस्या आउन सक्छ । समस्या आउँदा हामीले सेवा दिन सकेनौ भने त्यो सामान उहाँले फाल्नु पर्यो भने, रिप्लेस गर्नु पर्यो भने त उपोक्ताले सक्दैन । त्यस कारण जहिले पनि हामी उपभोक्तालाई वारेण्टी सहितको सामान बेच्छौं । हामी बिना वारेण्टीको सामान किन्दा पनि किन्दैनौँ अनि बेच्दा पनि बेच्दैनौ । आम उपभोक्ताले पनि सामान किन्दा सचेत भएर किन्नु पर्यो । अलि सस्तो पाए भन्दैमा बिना वारेण्टीको सामान किन्नु भएन । पछी समस्या पर्न सक्छ ।
लकडाउनपछि अनलाइन मार्केटिङ मार्फत पनि सेवा दिनु भैरहेको छ, त्यो कतिको प्रभावकारी छ ?
- हाम्रो अनलाइन व्यापार पहिला पनि थियो । सिजी डिजिटल डटकम भन्ने छ । यसले सामान वेच्ने काम गर्छ । हाम्रो वेवसाइट पनि छ । त्यसमा चाँही कम्पनिको विवरण राखिएको छ । त्यसमा प्रोडक्टस्को प्रकार, मूल्यको बारेमा हेर्न सकिन्छ । लकडाउनको समयमा शारिरीक अवस्थामा उपस्थिती हुन सम्भव थिएन । त्यो अवस्थामा अलिकति बुस्ट मात्र भएको हो । बुस्ट हुँदा ग्राहकको अलिकति नजर पर्यो र व्यापार बढ्यो । त्यति मात्र हो ।
सिजी ब्राण्डको सामानले समग्रमा मार्केट कति ओगटेको छ ?
- हाम्रो विभिन्न प्रोडक्टहरु छ । जस्तै हामीसँग टिभी, रेफ्रिजेरेटर, फ्रिज, वासिङ मेसिन, भ्याकुम क्लिनरलगायत घरायसी सामान प्राय सबै छन । त्यो मार्केटमा प्रोडक्टका आधारमा फरक फरक हुन्छ । औसतमा हिसाव गर्दा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म सिजी ब्राण्डको मार्केट हिस्सा छ । त्यसमा आइरनदेखि लिएर एसी र फोरके गुगल एलईडिसम्म छन । प्रोडक्टको भिजिविलिटीका आधारमा हाम्रो उदेश्य प्रत्येक नेपालीका घरमा सिजीको एउटा सामान होस भन्ने हो । अहिले ५० प्रतिशत नेपालीका घरमा भने सिजीको सामान रहेका छन ।
यसको मार्केटिङको स्थिरतालाई कसरी कायम गर्दै हुनुहुन्छ, यो कसरी सफल छ ?
- यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वासको कुरा हो । हाम्रो सामान भनेको बेचेर मात्र सकिँदैन । यहाँ जो हाम्रो प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, उहाँहरु भन्दा एककदम अगाडी भएकै कारण यो सफलता प्राप्त भएको हो । त्यसको मुख्य कारण चौधरी गु्रपको विश्वसनियता पनि हो । उपभोक्ता यस गु्रपको सामानलाई अरुभन्दा २ रुपैयाँ बढी हाल्न तयार छन । हाम्रो सामानमा उच्च गुणस्तर भएरनै यस्तो भएको हो । अर्को मुख्य कुरा बिक्री पछिको सेवा हो । सामान खरिदपछि आइपरेका विभिन्न प्राविधिक र भौतिक समस्याहरु हामीले तत्कालै समाधान गर्छौ । हाम्रो देशभरी १४० वटा सर्भिस सेन्टरहरु छन । कसैको घरमा टिभी जडानमा समस्या भयो भने हाम्रै टेक्निसियनहरु गएर बनाउँछन । हाम्रो सर्भिस गुणस्तरीय छ । अर्को हाम्रो सबलपक्ष भनेको हाम्रो विक्री पार्टनरहरु छन । यो डिलर सञ्जाल मुलुकका ६८ वटा जिल्लामा जोडिएको छ । त्यो पनि कम्पनि सफल हुनुको एक देन हो ।
सामान आयात गर्दा भन्सारबिन्दुमा केही कठिनाईहरु छन ?
- त्यस्तो कठिनाई त छैन । हामी नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेका छौँ । त्यसकारण पनि कठिनाई छैन । प्राविधिक कुरा अलग बाटो भयो । कहिलेकाही ५ दिनसम्म सवारी साधन भन्सारमै रोकिन्छन । त्यो हामीले भन्न मिलेन । तर, सरकारबाट त्यस्तो अवरोध केही छैन ।
नयाँ वर्ष २०७८ का लागि अफरहरु ल्याउनु भएको छ, यसको बारेमा केही बताइदिनुस न ?
- आम उपभोक्तालाई नयाँ वर्षको शुभकामनासहित हामीले केही अफरहरु पनि ल्याएका छौँ । सिजी राम्रो त छदैँ छ । त्यसमा पनि सिजी उपभोक्ता सबैको हो भन्न चाहान्छौँ । नेपाली ब्राण्ड हो । हामीले सस्तो मूल्यमा राम्रो क्वालीटी दिएका छौँ । जस्तैः टिभी, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिनमा अफर ल्याएका छौँ । कुनैमा अधिकतम छुट पाउनुहुनेछ भने कुनैमा सियोरसट प्रोडक्ट पनि पाउनु हुनेछ । वासिङ मेसिनको खरिदमा मिक्चर, ग्राण्डर उपहार दिइरहेका छौँ भने टिभी किन्दा अधिकतम छुट दिइरहेका छौँ । हामीले अहिले एसी, ४३ इन्च बढिको टिभी र वासिङ मेसिनको जडान निशुल्क गरिरहेका छौँ । ग्राहकहरु जहाँ छन हामी त्यहाँ छौँ । तपाईहरु खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने नयाँ वर्षको अवसरमा विशेष छुट सहित पाउनुहुनेछ ।
अन्त्यमा तपाई सिजी ब्राण्डका उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
- म सिजी ब्राण्डका उपभोक्तालाई यो कञ्यूमर डियूरेवल प्रोडक्ट हो । यो आज लगेर भोली सकिने प्रोडक्ट पनि होइन । हामीसँग दशक, दुई दशक बढी चल्ने प्रोडक्ट छ । त्यस्ता ठूला प्रोडक्ट खरिद गर्नेक्रममा तपाईहरुले यसको विश्वसनीयतालाई ख्याल गर्न आग्रह गर्छु । सिजी मात्र नभएर जुनसुकै सामान खरिद गर्दा त्यसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ । त्यसको बिक्रीपछिको सर्भिस कस्तो छ, कम्पनी कस्तो हो, कुनै कम्पनिले १० वर्षको वारेन्टी दिन्छन तर, त्यो कम्पनी १० वर्षपछि कहाँ हुन्छ थाहा हुन्न । पाँच वर्ष अगाडीका कम्पनी आज छैनन् । त्यस्तो कम्पनीका ग्राहकले सेवा पाउँदैनन् । हाम्रो त जुम्लामा समस्या पर्यो भने पनि समाधान गर्ने टिम र संरचना छ ।
एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनेमा ९९ प्रतिशत ढुक्क हुनुहोस् -विशाल भट्टराई
भीम रावललाई प्रश्न- तपाईको उम्मेदवारी किन ? १० भाइलाई कसरी समेटेर लैजानुहुन्छ ?
‘कम्युनिस्ट मुभमेन्टको विवादरहीत नेता ओलीजी नै हो, उहाँ दोहोरिए राम्रो’ -महन्थ ठाकुर
एमालेमा गुटबन्दी सकियो, महाधिवेशनले साझा नेता छान्छ -पद्‌मा अर्याल
सहमति नहुने हो भने अध्यक्षमा दर्जनौँले उम्मेदवारी दिनुपर्छ -योगेश भट्टराई
चितवन माओवादीको प्रभाव क्षेत्र हो भन्नु भ्रम मात्र हो -प्रदीप ज्ञवाली